Evan Spiegel တစ်ယောက် အသက် ၂၀ ကျော်နဲ့ ဘယ်လို ဘီလျံနာဖြစ်လာသလဲ?
12 Jun 2018 . 12:23 PM
Evan Spiegel အတွက်ကတော့ ဘဝက သာသာယာယာဖြစ်နေပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ Forbes မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အဆိုအရ လက်ရှိအချိန်မှာ ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံပိုင်ဆိုင်နေပြီး လက်ရှိမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန် ဘီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Evan Spiegel တစ်ယောက် ဘယ်လိုမျိုး ဒီလို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘီလျံနာတစ်ယောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ? သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Snap Inc. ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Snapchat App ဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေထဲမှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတာကြောင့်လား? ဒါမှမဟုတ် Snapchat Spectacles မျက်မှန်တွေကြောင့်ပဲလား?
Evan Spiegel ကတော့ အခုလိုမျိုး သူ့ဘဝ တိုးတက်လာမှုအပေါ်ကို တချိန်တုန်းက Stanford Business Conference မှာတုန်းက ပြောခဲ့တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ” ကျွန်တော်က ငယ်ရွယ်ပြီး၊ အသားဖြူ၊ ပညာတတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော် တကယ်ကို ကံကောင်းခဲ့ပြီးတော့ ဘဝက မတရားခဲ့ပါဘူး” လို့ ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ကံကောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့ Evan Spiegel ရဲ့ ဘဝဇတ်ကြောင်းကို ပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့။
Evan Spiegel ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့မှာ Los Angeles မြို့၊ Malibu အရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ Pacific Palisades မှာကြီးပြင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ မိဘ နှစ်ဦးလုံးက Ivy League ကနေ ပညာတတ်မြောက်ထားတဲ့ ရှေ့နေနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Spiegel တစ်ယောက် အထက်တန်းကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ မိဘတွေက ကွာရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။
Spiegel တစ်ယောက် အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်၊ ကားမောင်းလိုင်စင်ရတာနဲ့ Cadillac Escalade SUV ကားကြီးကို ရရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒီကားကို သူရဲ့ ကျောင်းဘေးမှာရှိတဲ့ Edison Parking Lot မှာ ရပ်ထားလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
Spiegel တို့မိသားစုဟာ နဂိုထဲက ငွေကြေးချမ်းသာပြီးတော့ Exclusive Club တွေဖြစ်တဲ့ Jonathan Club၊ Santa Monica and the La Jolla Beach နဲ့ Tennis Club လိုမျိုး Club တွေရဲ့ Member တွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့က ဥရောပကို မကြာခဏခရီးတွေထွက်နေကြပြီး ကနေဒါမှာလည်း ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ Snowboarding လုပ်လေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Evan Spiegel က အခုဘဝကိုလည်း “ကျွန်တော်တို့က ပူစီပေါင်းဘဝထဲမှာ နေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
Spiegel ဟာနောက်ပိုင်းမှာ Stanford မှာ Product Design လေ့လာခဲ့ပြီး အဲ့ဒီမှာ နောက်ပိုင်း Snapchat ရဲ့ Co-founders တွေဖြစ်လာမယ့် Reggie Brown နဲ့ Bobby Murphy ကို တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး Snapchat ကို ပြုလုပ်ဖြစ်တဲ့အပေါ်ကိုလည်း Murphy က Forbes မဂ္ဂဇင်းကို “ကျွန်တော်တို့က မလန်းပါဘူး၊ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အရမ်းမိုက်ပြီး လန်းနေတဲ့ အရာတွေကို ပြုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Spiegel ဟာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Stanford ကနေ ဘွဲ့မယူခင် အချိန်အနည်းငယ်အလိုမှာပဲ ထွက်ခွာခဲ့ပြီးတော့ Snapchat ကို အချိန်ပြည့်ပေးနိုင်ဖို့ အာရုံစိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပေးပို့ပြီးတာနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ Messaging App တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Picaboo ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Snapchat ရဲ့ ပထမဆုံး ရုံးချူပ်ကတော့ Palisades မှာရှိတဲ့ Spiegel ရဲ့ ဖခင်နေအိမ်မှာပဲဖြစ်ါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ Snapchat ကုမ္ပဏီရုံးခန်းကို Venice Boardwalk ဘက်ကို ရွေ့ပြောင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း Spiegel ကတော့ သူ့ဖခင်အိမ်မှာပဲ နှစ်အတော်ကြာဆက်နေခဲ့ပြီးတော့ အခုလိုနေတာကလည်း “ဌားရမ်းခ သက်သာလို့” ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ Spiegel က သူ့ဖခင်အိမ်ကနေ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးတော့ Brentwood မှာ ဒေါ်လာ ၃.၃ သန်းတန် အိပ်ခန်း ၃ ခန်းပါ နေအိမ်ကို ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
Snapchat ဟာ အဲ့ဒီအချိန်ထဲက အောင်မြင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင် Facebook CEO Mark Zuckerberg ရဲ့ ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံနဲ့ ဝယ်ယူမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက် နာမည်ကြီးခဲ့ပါသေးတယ်။
Evan Spiegel က ဇွန်လ ၂၀၁၅ မှာတော့ Funding အကြီးအကျယ်ရရှိခဲ့ပြီး Spiegel ကိုယ်တိုင် သူကိုယ်တိုင်အတွက် Ferrari ပြိုင်ကားတစ်စီးဝယ်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါတင်မဟုတ်သေးပဲ Spiegel ဟာ Pop Superstar Taylor Swift နဲ့လည်း ကာလတိုတွဲခဲ့သေးတယ်လို့ သိရပြီးတော့ သူတို့ ၂ ယောက်က ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းက New Year’s Eve Party မှာ စတွေ့ခဲ့တာလို့လည်း သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း Spiegel က ၂၀၁၅ ခုနှစ် နွေရာသီမှာ Supermodel Miranda Kerr နဲ့ တွဲနေတာကို ကြေညာခဲ့ပြီးတော့ မေလ ၂၀၁၆ မှာဆိုရင် သူတို့အတွဲက Harrison Ford ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စတုရန်းပေ ၇၁၆၄ ပေရှိတဲ့ နေအိမ်ကိုလည်း ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းနဲ့ ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ဇူလိုင်လ ၂၀၁၆ မှာတော့ သူတို့ နှစ်ယေက်က စေ့စပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကြေညာခဲ့ပြန်ပါတယ်။
Evan Spiegel & Miranda Kerr Engagement
အဆိုပါ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာပဲ Snapchat ကို Snap Inc. လို့ နာမည်ပြောင်းခဲ့ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီကိုလည်း Camera Company အဖြစ် ခံယူခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာပဲ Camera တပ်ဆင်ထားတဲ့ Snapchat Spectacles နေကာမျက်မှန်တွေကိုပါ ထုတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Spiegel ဟာ သူရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ သိုသပ်မှုကို အလွန်တန်ဖိုးထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ခါတလေမှာ Snap Inc. ရဲ့ အလုပ်သမားတွေကိုယ်တိုင်တောင် အများပြည်သူကို တရားဝင်မကြေညာခင်အထိ ကုမ္ပဏီက ဘယ် Product တွေကို ပြုလုပ်နေသလဲဆိုတာကို မသိတဲ့အထိကို သိုသိုသပ်သပ် အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ Spiegel ရဲ့ Snapchat App ဟာ လူငယ်တွေကြားထဲမှာ ရေပန်းစားနေဆဲပဲဖြစ်ပြီးတော့ Mark Zuckerberg ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Facebook နဲ့ Instagram App တွေကတော့ Snapchat Stories လိုမျိုး Features တွေကို ကူးယူနေကြတဲ့အထိ ဖြစ်နေပါပြီ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်နဲ့ ဘီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့ Evan Spiegel က တကယ် သူပြောခဲ့သလိုပဲ ကံအရမ်းကောင်းပြီး အခုလို ဘီလံနာတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် အခု Tech Industry ထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံး CEO တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။
Ref : Inc. | Wikipedia
Evan Spiegel အတှကျကတော့ ဘဝက သာသာယာယာဖွဈနပေါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာ Forbes မဂ်ဂဇငျးရဲ့ အဆိုအရ လကျရှိအခြိနျမှာ ဒျေါလာ ၃ ဘီလီယံပိုငျဆိုငျနပွေီး လကျရှိမှာ အသကျအငယျဆုံး ကိုယျ့ထူးကိုယျခြှနျ ဘီလံနြာတဈယောကျဖွဈနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Evan Spiegel တဈယောကျ ဘယျလိုမြိုး ဒီလို ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ဘီလံနြာတဈယောကျဘယျလိုဖွဈလာသလဲ? သူတညျထောငျခဲ့တဲ့ Snap Inc. ကုမ်ပဏီက ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ Snapchat App ဟာ ဆယျကြျောသကျတှထေဲမှာ ရပေနျးအစားဆုံးဖွဈနတောကွောငျ့လား? ဒါမှမဟုတျ Snapchat Spectacles မကျြမှနျတှကွေောငျ့ပဲလား?
Evan Spiegel ကတော့ အခုလိုမြိုး သူ့ဘဝ တိုးတကျလာမှုအပျေါကို တခြိနျတုနျးက Stanford Business Conference မှာတုနျးက ပွောခဲ့တာတဈခုရှိပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ ” ကြှနျတျောက ငယျရှယျပွီး၊ အသားဖွူ၊ ပညာတတျတဲ့ ယောကျြားလေးတဈယောကျပါ။ ကြှနျတျော တကယျကို ကံကောငျးခဲ့ပွီးတော့ ဘဝက မတရားခဲ့ပါဘူး” လို့ ပွောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုး ကံကောငျးခဲ့တယျလို့ပွောကွားခဲ့တဲ့ Evan Spiegel ရဲ့ ဘဝဇတျကွောငျးကို ပွနျပွောငျးလလေ့ာကွညျ့ကွတာပေါ့။
Evan Spiegel ကို ၁၉၉၀ ခုနှဈ ဇှနျလ ၄ ရကျနမှေ့ာ Los Angeles မွို့၊ Malibu အရှဘေ့ကျခွမျးမှာ ရှိတဲ့ Pacific Palisades မှာကွီးပွငျးခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ မိဘ နှဈဦးလုံးက Ivy League ကနေ ပညာတတျမွောကျထားတဲ့ ရှနေ့နှေဈယောကျဖွဈပါတယျ။ Spiegel တဈယောကျ အထကျတနျးကြောငျးတကျနတေဲ့အခြိနျမှာတော့ မိဘတှကေ ကှာရှငျးခဲ့ကွပါတယျ။
Spiegel တဈယောကျ အသကျ ၁၆ နှဈပွညျ့တဲ့အခြိနျ၊ ကားမောငျးလိုငျစငျရတာနဲ့ Cadillac Escalade SUV ကားကွီးကို ရရှိခဲ့ပွီး အဲ့ဒီကားကို သူရဲ့ ကြောငျးဘေးမှာရှိတဲ့ Edison Parking Lot မှာ ရပျထားလရှေိ့တာဖွဈပါတယျ။
Spiegel တို့မိသားစုဟာ နဂိုထဲက ငှကွေေးခမျြးသာပွီးတော့ Exclusive Club တှဖွေဈတဲ့ Jonathan Club၊ Santa Monica and the La Jolla Beach နဲ့ Tennis Club လိုမြိုး Club တှရေဲ့ Member တှလေညျးဖွဈနပေါတယျ။ သူတို့က ဥရောပကို မကွာခဏခရီးတှထှေကျနကွေပွီး ကနဒေါမှာလညျး ရဟတျယာဉျနဲ့ Snowboarding လုပျလရှေိ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ Evan Spiegel က အခုဘဝကိုလညျး “ကြှနျတျောတို့က ပူစီပေါငျးဘဝထဲမှာ နထေိုငျခဲ့ကွတာပါ” လို့ ပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။
Spiegel ဟာနောကျပိုငျးမှာ Stanford မှာ Product Design လလေ့ာခဲ့ပွီး အဲ့ဒီမှာ နောကျပိုငျး Snapchat ရဲ့ Co-founders တှဖွေဈလာမယျ့ Reggie Brown နဲ့ Bobby Murphy ကို တှခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အခုလိုမြိုး Snapchat ကို ပွုလုပျဖွဈတဲ့အပျေါကိုလညျး Murphy က Forbes မဂ်ဂဇငျးကို “ကြှနျတျောတို့က မလနျးပါဘူး၊ အဲ့ဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ အရမျးမိုကျပွီး လနျးနတေဲ့ အရာတှကေို ပွုလုပျဖို့ ကွိုးစားခဲ့တာပါ” လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Spiegel ဟာ နောကျပိုငျးမှာတော့ Stanford ကနေ ဘှဲ့မယူခငျ အခြိနျအနညျးငယျအလိုမှာပဲ ထှကျခှာခဲ့ပွီးတော့ Snapchat ကို အခြိနျပွညျ့ပေးနိုငျဖို့ အာရုံစိုကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူတို့အဖှဲ့ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှဈမှာ ပထမဆုံးအနနေဲ့ ပေးပို့ပွီးတာနဲ့ ပြောကျကှယျသှားတဲ့ Messaging App တဈခုဖွဈတဲ့ Picaboo ကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ Snapchat ရဲ့ ပထမဆုံး ရုံးခြူပျကတော့ Palisades မှာရှိတဲ့ Spiegel ရဲ့ ဖခငျနအေိမျမှာပဲဖွဈါတယျ။
နောကျပိုငျးမှာ Snapchat ကုမ်ပဏီရုံးခနျးကို Venice Boardwalk ဘကျကို ရှပွေ့ောငျးခဲ့ပမေယျ့လညျး Spiegel ကတော့ သူ့ဖခငျအိမျမှာပဲ နှဈအတျောကွာဆကျနခေဲ့ပွီးတော့ အခုလိုနတောကလညျး “ဌားရမျးခ သကျသာလို့” ဆိုပွီးပွောကွားခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး နိုဝငျဘာလ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာတော့ Spiegel က သူ့ဖခငျအိမျကနေ ရှပွေ့ောငျးခဲ့ပွီးတော့ Brentwood မှာ ဒျေါလာ ၃.၃ သနျးတနျ အိပျခနျး ၃ ခနျးပါ နအေိမျကို ဝယျယူခဲ့ပါတယျ။
Snapchat ဟာ အဲ့ဒီအခြိနျထဲက အောငျမွငျနတောဖွဈပွီးတော့ ၂၀၁၃ ခုနှဈတုနျးကဆိုရငျ Facebook CEO Mark Zuckerberg ရဲ့ ဒျေါလာ ၃ ဘီလီယံနဲ့ ဝယျယူမှုကို ငွငျးပယျခဲ့တဲ့အတှကျ နာမညျကွီးခဲ့ပါသေးတယျ။
Evan Spiegel က ဇှနျလ ၂၀၁၅ မှာတော့ Funding အကွီးအကယျြရရှိခဲ့ပွီး Spiegel ကိုယျတိုငျ သူကိုယျတိုငျအတှကျ Ferrari ပွိုငျကားတဈစီးဝယျယူခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒါတငျမဟုတျသေးပဲ Spiegel ဟာ Pop Superstar Taylor Swift နဲ့လညျး ကာလတိုတှဲခဲ့သေးတယျလို့ သိရပွီးတော့ သူတို့ ၂ ယောကျက ဒီဇငျဘာလ ၂၀၁၃ ခုနှဈတုနျးက New Year’s Eve Party မှာ စတှခေဲ့တာလို့လညျး သတငျးတှထှေကျခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး Spiegel က ၂၀၁၅ ခုနှဈ နှရောသီမှာ Supermodel Miranda Kerr နဲ့ တှဲနတောကို ကွညောခဲ့ပွီးတော့ မလေ ၂၀၁၆ မှာဆိုရငျ သူတို့အတှဲက Harrison Ford ပိုငျဆိုငျတဲ့ စတုရနျးပေ ၇၁၆၄ ပရှေိတဲ့ နအေိမျကိုလညျး ဒျေါလာ ၁၂ သနျးနဲ့ ဝယျယူခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျပိုငျး ဇူလိုငျလ ၂၀၁၆ မှာတော့ သူတို့ နှဈယကျေက စစေ့ပျပွီးဖွဈတယျဆိုတာ ကွညောခဲ့ပွနျပါတယျ။
အဆိုပါ ၂၀၁၆ ခုနှဈ စကျတငျဘာလမှာပဲ Snapchat ကို Snap Inc. လို့ နာမညျပွောငျးခဲ့ပွီးတော့ ကုမ်ပဏီကိုလညျး Camera Company အဖွဈ ခံယူခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီမှာပဲ Camera တပျဆငျထားတဲ့ Snapchat Spectacles နကောမကျြမှနျတှကေိုပါ ထုတျပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Spiegel ဟာ သူရဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှမှော သိုသပျမှုကို အလှနျတနျဖိုးထားတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီးတော့ တဈခါတလမှော Snap Inc. ရဲ့ အလုပျသမားတှကေိုယျတိုငျတောငျ အမြားပွညျသူကို တရားဝငျမကွညောခငျအထိ ကုမ်ပဏီက ဘယျ Product တှကေို ပွုလုပျနသေလဲဆိုတာကို မသိတဲ့အထိကို သိုသိုသပျသပျ အလုပျလုပျတာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာ Spiegel ရဲ့ Snapchat App ဟာ လူငယျတှကွေားထဲမှာ ရပေနျးစားနဆေဲပဲဖွဈပွီးတော့ Mark Zuckerberg ပိုငျဆိုငျတဲ့ Facebook နဲ့ Instagram App တှကေတော့ Snapchat Stories လိုမြိုး Features တှကေို ကူးယူနကွေတဲ့အထိ ဖွဈနပေါပွီ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ အသကျ ၂၈ နှဈအရှယျနဲ့ ဘီလံနြာတဈယောကျဖွဈလာတဲ့ Evan Spiegel က တကယျ သူပွောခဲ့သလိုပဲ ကံအရမျးကောငျးပွီး အခုလို ဘီလံနာတဈယောကျဖွဈလာခဲ့တယျဆိုရငျတောငျ အခု Tech Industry ထဲမှာ အအောငျမွငျဆုံး CEO တဈယောကျဖွဈနတေယျဆိုတာကိုတော့ ငွငျးလို့မရတဲ့အခကျြတဈခုပါ။